Amarradaada oo dhan waa la joojin karaa ilaa laga soo diro. Haddii amarkaaga la bixiyay oo aad u baahan tahay inaad bedesho ama aad joojiso amar, waa inaad nala soo xiriirtaa saacadaha 12. Marka nidaamka baakada iyo maraakiibta ay bilaabeen, mar dambe looma joojin karo.
Ku qanacsanaantaada waa mudnaanta koowaad. Sidaa darteed, haddii aad jeclaan lahayd in laguu soo celiyo waxaad codsan kartaa mid kasta oo aan lahayn wax sabab ah.
Haddii wax qaldamaan sheyga oo aad beddelikarto alaabtii, waad nala soo xiriiri kartaa si aad u soo celiso lacag buuxda.
Dib-u-soo-noqoshadu waxay ka-hortaggaan xooga aan u hayno jiritaanka: soo-noqosha kastaa waxay leedahay raad-raac kaarboon. Markaa uun noo sheeg waxa khaldamay, sawir soo dir, oo waxaan ku siin doonnaa lacagtaadii si buuxda.
Markaa, haddii ay suurtagal tahay, waxaad ku tabaruci kartaa badeecadaada hay'ad samafal ama dib u warshadeyn.
Waxaad ku soo gudbin kartaa codsi lacag celin ah 15 maalmood gudahood ka dib bixinta amarka. Waxaad ku sameyn kartaa adoo noo soo diraya E-mayl.
Haddii aadan ku helin badeecada waqtiga la hubo (60 maalmood oo aysan ku jirin 2-5 maalmood ka shaqeynta) waxaad codsan kartaa lacag celin ama dib u soo celin. Haddii aad heshay shay khaldan, waxaad codsan kartaa lacag celin ama dib u soo celin. Haddii aadan doonayn badeecada aad heshay waxaad codsan kartaa lacag celin laakiin waa inaad ku soo celisaa shayga adiga oo kharashkaaga ku baxaya iyo kharashka dhoofinta shayga ayaa laga jari doonaa qaddarka lacag -celinta, shayga waa in aan la adeegsan oo lambarka raadraaca waa loo baahan yahay.
Amarkaagii ma imanin sababo ku lug leh xakamayntaada (sida bixinta cinwaanka maraakiibta khaldan).
Your amar ma ay gaadhin ay sabab u tahay xaalado aan caadi ahayn ka baxsan gacanta ku ah WoopShop.com (Ie aan waayay by caadooyinka, dib masiibo dabiici ah).
xaalado kale oo gaar ah oo ka baxsan gacanta ku ah WoopShop.com
Haddii sabab kasta ha noqotee aad jeclaan lahayd inaad ku beddesho badeecadaada, laga yaabee inay le'eg tahay dhar ka duwan cabbir ahaan. Waa inaad marka hore nala soo xiriirtaa annaguna waxaan kugu hagi doonnaa tallaabooyinka aad qaadayso. ** Fadlan dib ha noogu soo dirin gadashadaada ilaa aan kuu idmano inaad sidaas sameysid mooyee.